Kulanka arimaha dadweynaha ee QM oo Iswiidhen lagu qabanayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulanka arimaha dadweynaha ee QM oo Iswiidhen lagu qabanayo
La daabacay onsdag 19 februari 2014 kl 12.16
Dhamaadka bisha abriil waxaa Iswiidhen lagu qabanayaa kulanka Qaramada Midoobey ee arimaha dadweynaha.
Kulankii waxuu dabo socdaa kulan muddo 20 sanno hadda laga jooga oo lagu qabtey magaalada Qaahira dalka Masar, laguna dajiyey hadef lagu yareynayo geerida hooyada uurka leh iyo caruurta saqiirta. Tan iyo kulankaas kabacdii tillaabooyin horumar leh ayaa laga sameeyey arimaha galmada iyo daryeelka umusha. Laakiin xataa Iswiidhen weli waxaa jira waxyaalo u baahan wax ka qabad, sidaas waxaa qaba Alireza Javaheri oo lataliye ka ah wasaaradda arimaha dibadda.
- Arimahan markasta waxey u baahan yahiin in loo halgamo oo aan loo qaadan arimahan wax markasta iska hubaal ah. Doodo badan oo la xiriira arimaha HBT iyo ilmo soo ridida Iswiidhen marar badan ayey ka dhacaan. Xataa heer caalami arimahan marna hal tillaabo ayaa horey loo qaadaa marna hal tillaabo ayaa dib loo qaadaa, ayuu yeri.
Muddo 20 sanno laga joogo ayey aheyd markii lagu qabtey kulanka dadweynaha ee Qaramada Midoobey magaalada qaahira dalka Masar. Kulankaas oo ay ka soo qayb-galeen 20 000 ruux oo iskugu jira siyaasiin iyo shaqaale ka howl-gala QM. Waxaana kulankaas lagu dajiyey hadef ka kooban afar qodob oo la doonayey in laga sal gaaro sannadka 2015ka. Waxaana la go’aamiyey in waddamada calaamku meelmariyaan gaarista hadefyadaas.
Waxaa kamid ahaa hadefyadaas in waddan weliba dadweyanhiisa u hirgeliyo tacliinta hoose oo ay haweenka xag u yaalenayaan helida tacliinta hoose, dhaxe iyo weliba heerka jamacadeed. Sidoo kale waxaa kamid ahaa hadefyada lagu dejiyey kulankas yareynta caruurta saqiirta iyo hooyooyinka umul raacda iyo in dadka gacan lagu siiyo ka soo baxida kaalintooda waalidnimo.
Iminka sannadka waa 2014, waxaana la joogaa qabashada xilligii la qaban lahaa kulan cusub oo arimaha dadweynaha loog hadlayo, kaas oo dhamaadka bisha abril sannadkan lagu qabanayo Iswiidhen. Iswiidhen arimahan adweynaha horumar weyn ayey ka samesyey; Sidaas waxaa leh Katarina Lindhl oo horey xoghaye guud u aheyd ururka ka warbaxiya arimaha galmada RFSU.
- waxa horumarka laga sameeyey arimaha furfurnaanshaha. Oo maanta wax welibaa yaa laga hadli karaa. Maanta da’yarta waxey guriyaha keensan karaan ruux kastoo xiriir galmo la leeyahiin. Wax ugu xun oo ay la kulmi karaan waxey noqon kartaa in lagu qayliyo haddii aysan subaxii xalin weelka ay shaaxa k cabeen.